उपत्यका वरिपरी ५ लाख पर्यटक अट्ने पूर्वाधार तयार गरिने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पर्यटन > उपत्यका वरिपरी ५ लाख पर्यटक अट्ने पूर्वाधार तयार गरिने
उपत्यका वरिपरी ५ लाख पर्यटक अट्ने पूर्वाधार तयार गरिने
मन्त्रालयमा आज नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशकहरुसँगको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक विदाको दिनमा उपत्यका वरिपरी पाँच लाख पर्यटक अटने गरी पर्यटन पूर्वाधार पदमार्ग,साईकलिङ, ट्रेल पर्यटन उपजको सम्भावनाको अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पर्यटन बोर्डको शाखा चाँडो गठन गर्न समेत निर्देशन दिनु भएको छ । मन्त्री भट्टराईले पर्यटन बोर्डलाई सातवटा भाषा नेपाली,हिन्दी, चाईनिज अरवी पोर्चुगल र स्पेनिस भाषामा डिजिटल सामाग्री तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले अनावश्यक खर्च कटौती गरी आर्थिक मितब्ययिता कायम गर्न निर्देशन दिनुभयो । विदेश तथा स्वदेशमा हुने भ्रमण खर्चमा कटौती गर्न निर्देशन दिनु भएको हो ।
उहाँले पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई कोभिड १९ को महामारीको समयमा भर्चुअल टुरका प्याकेज बनाउन आग्रह गदै विश्व सम्पदा, हिमाल,टेकिङ सिमसार,म्युजियम निकुञ्ज लगायतका भर्चुअल टुरको सामाग्री तयार गर्न निर्देशन दिनु भएको हो ।
मन्त्री भट्टराई अहिलेको खोज अनुसन्धान, योजना निर्माण रिर्पोट तथा पर्यटकिय क्षेत्रका बृत्त चित्र लगायत सामाग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोभिडका कारण पर्यटन ब्यवसायी,पर्यटन मजदुर लगायतमा देखिएका समस्या तथा पलायन रोक्न मनोसामाजिक परामर्श सेवा शुरु गर्न पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिनु भएको हो ।
उहाँले विभिन्न देशका रहेका पर्यटन डेक्सलाई सक्रिय बनाई स्वदेश तथा विदेशमा पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाहरुसग नेटवक विस्तार गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । कोभिड १९ ले सवै भन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रमा परेका भन्दै मन्त्री भट्टराईले कोभिड पछि पर्यटन उत्थानका लागि के के गर्न सकिन्छ त्यसको आवश्यक योजना बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री भट्टराई नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा,खेलकुद पर्यटनको संभावनाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. धन्नजय रेग्मीले आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को प्रगति र ७७। ०७८ का कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
२०७७ भदौ १५ गते १५:१९ मा प्रकाशित
अब कस्तो होला काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा ? मोडालिटीबारे छलफल सुरु
एनआइसी एसिया बैंकले पनि आफ्नो छुट्टै स्वीच राखेर कारोबार गर्ने
काँग्रेसको अवरोेधका कारण प्रदेशसभाको बैठक स्थगित
खुल्यो हाइड्रोको ३० लाख कित्ता साधारण सेयर, थाहा पाउनुहोस् कहाँ-कहाँबाट भर्न मिल्छ !